नेपालमै घट्यो एस्तो अपत्यारिलो घटना, जस्लाई आफ्नै बाबुले..! – UPDATE LINK
नेपालमै घट्यो एस्तो अपत्यारिलो घटना, जस्लाई आफ्नै बाबुले..!
काठमाण्डौ । छोरीमाथि कर णी गरी फरार रहेका एक जनालाई सुचना पाएको २४ घण्टा पनि नबित्दै उदयपुरको कटारीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कटारी नगरपालिका वडा नम्बर १ मा १५ बर्षिया छोरी कर णी पछि फरार भएका बाबुलाई कटारी २ गँरासमा लुकेर बसेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
गत मंगलबार घरमा कोही नभएको मौकाछोपी ३५ बर्षिय बाबुले छोरीलाई यस्तो गरेको भन्दै बिहीबार पि’डितले कटारी महिला संञ्जालको सहयोगमा इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीमा जाहेरी दिए लगत्तै उनको खोजी कार्य तिब्र पारिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीका डिएसपी हेमन्त भण्डारीले जानकारी दिए ।
बेलसोत प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक ज्ञान कुमार राउत सहित इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीको टोलीले आरोपि त लाई पक्राउ गरेको पनि भण्डारीलेबताए । घटना पछि पछि आफन्तलाई जानकारी गरे स;किदिने ध म्कि पीडितले बताएकी छिन् । बालिकाको बिहीबार कटारी अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गरिएको छ ।
त्यस्तै सङ्क्रमणका कारण रौतामाई गाउँपालिका–७ मुर्कुचीमा एक हप्ताभित्र एउटै परिवारका दुई छोरा र आमाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार यही जेठ १५ गते ४५ वर्षीय साइला छोराको उपचारका क्रममा विराटनगरस्थित नोबेल अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो भने १७ गते सोही परिवारका ५० वर्षीय जेठा छोराको मृत्यु भएको थियो ।
आज बिहान होमआइसोलेशनमा नै उपचार गराउँदै गरेकी ६५ वर्षीया आमाको पनि मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । कान्छा छोरा भने उपचारपछि तीन दिनअघि बाँचेर घर फर्कन सफल भएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख मोहन सुवेदीले बताए । यसरी एउटै घरका दुई छोरा र आमाको यसैका कारण मृत्यु भएको जिल्लाकै पहिलो घटना भएको प्रमुख सुवेदीले बताए । जिल्लामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आज बिहानसम्ममा ३७ पुगेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।